🥇 ▷ Google Chrome wuxuu ku ogaanayaa 316,000 isticmaale oo leh furaha sirta ah ✅
Google Chrome wuxuu ku ogaanayaa 316,000 isticmaale oo leh furaha sirta ah
Daraasad dhowaan la sameeyay, Google waxay ku ogaatay, iyada oo loo marayo kordhinta kororka ee loo yaqaan “Chrome Check”, “Baaritaanka sirta ah”, in 1.5% ka mid ah marin loo helo 21 milyan oo koonto la tirtiray.
Sida laga soo xigtay baaraha raadinta, waxaa jira boqolaal kun oo akoon oo leh magacyo iyo fure sir ah oo aan kalsooni ku qabin xadgudubyada xisbiga saddexaad.
316,000 adeegsadeyaal ayaa la siiyay furaha sirta ah
Sida lagu sheegay warbixin Google, shirkaddu waxay ku xaqiijisay aaladda xaqiijinta sirta ah ee isticmaaleya badan oo ay ku leeyihiin furahooda sirta ah bogagga shabakadda. Intaas waxaa sii dheer, badankoodu waxay sii wadaan adeegsiga adeegyada iyagoo aan ka warqabin in lagu basaasayo.
Sidaa darteed, 21-ka milyan ee la falanqeeyay, 316 kun ayaa ku sugnaa xaaladdan, oo u dhiganta 1.5% wadarta isticmaaleyaasha.
Dembiilayaashu waxay iskudayaan inay guuleystaan ​​si ay u galaan boggag internet iyaga oo wata cadeymaha ay muujiyeen xadgudub dhinac saddexaad ah. Haddii aad u isticmaasho furayaasha sirta ah oo astaan ​​u ah koontadaada oo dhan, halistaas way baaba'aysaa.
Wuxuu xusay Jennifer Pullman, oo injineer software ka ah Google, oo laga soo xigtay ilo dhowr ah.
Sida loo bartay bishii Febraayo, Google wuxuu bilaabay isugeynta Baaritaanka Sirta. Sidaa darteed, shirkaddu waxay ku talajirtaa inay akoonnada tooska ah ee internetka ka ilaasho haakariska. Sida laga soo xigtay Google, inka badan 4 bilyan oo isku darka magaca isticmaale iyo erayga sirta ah ma aha amaan. Taasi waa, waxay horey ugu soo xadgudbeen jebinta xogta kooxaha saddexaad.
Meelkasta oo aad gasho, hadaad gasho magac isticmaale iyo eray sir ah oo aan aamin aheyn maxaa yeelay waxay ka muuqdaan jebinta xogta la yaqaan ee Google, waxaad heli doontaa digniin. Dib u dejiso lambarkaaga sirta ah Haddii aad u isticmaasho isla magacaaga iyo eraygaaga sirta ah koonto kasta, sidoo kale dib u dhig lambarkaaga sirta ah.
Google ayaa ku sifeynaysa sharraxa ku saabsan kordhinta ku jirta Bakhaarka Webka Chrome.
Bishii ugu horreysay oo keli ah, waxaan baarnaa 21 milyan oo adeegsado iyo eray sir ah oo aan u calaamadeynay in ka badan 316,000 kuwa aan ammaan lahayn. Gaar ahaan, 1.5% diiwaanada lagu baaro iyadoo la dheereeyey.
Waxaad ku xustay Google barta la daabacay khamiista.
Google ayaa sheegtay in adeegsadayaashu ay iska indhatirayaan digniinaha akoonnada la soo weeraray
Marka loo eego daraasadda Google, waxaa sidoo kale la ogaadey in xisaabaadka 81,368, oo qiyaastii 26% adeegsadayaasha, ay iska indhatiraan talooyinka. Waxaa la yaab leh, isticmaaleyaashu ma doonayaan inay ogaadaan sida dib loogu soo celiyo lambarka sirta ah ee lagu calaamadiyey kordhinta sababta oo ah kalsooni darro ayey qabaan.
Intaa waxaa u dheer, goobaha madadaalada ayaa leh boqolkiiba ugu sarreeya ee erayga sirta ah oo leh 6.3%, halka goobaha qaawan ay haysteen kaliya 3.6%. Marka lagu daro kuwan, bogagga maaliyadeed iyo kuwa dawladda ayaa aad ugu nugul xadgudubyada sirta ah, oo ay kala yihiin 0.3% iyo 0.2%, siday u kala horreeyaan.
Si ka sii wanaagsan, 60% lambarka sirta ee cusub ayaa laga aamin san yahay weerarada burburka, taas oo macnaheedu yahay in qofka wax weerarayaa u baahan doono in ka badan 100 milyan oo isku day ah oo lagu garto erayga cusub ee lagu galo. Daraasaddeenu waxay muujineysaa sida aaminka ah iyo helitaanka digaha digniinaha xadgudubka sirta ah ay gacan ka geysan karto yareynta cabir la xiriira afduubka akoonka.
Waxaa dhameystirtay shirkadda.
Mustaqbalka, Google wuxuu u adeegsan doonaa qalab ahaan asal ahaan Chrome, isagoo sameynaya falanqayn amni sir ah oo waqtiga-dhabta ah.